Shiinaha qiimaha ugu wanaagsan ee alaab -qeybiyeyaasha budada gargaarka shaandhaynta ee Shiinaha Warshadaha iyo Warshadda | Xinzheng
qiimaha ugu fiican alaab -qeybiyeyaasha budada gargaarka shaandhaynta ee Shiinaha
Gargaarka shaandhaynta ee Perlite waa badeecad kiimiko budada ah oo leh cabbir go'an oo gaar ah oo laga helay fidinta xulashada ciidda macdanta yar-yar ee la soo xushay, oo lagu kululeeyo gaas la nadiifiyey, oo ku jirta mashiinka qotonka toosan, ballaarinta, iyo shiididda iyo nadiifinta.
Hordhaca gargaarka shaandhaynta Perlite
Faahfaahinta kaalmada shaandhaynta Perlite
Gargaarka shaandhaynta perlite waa midabka cad, cufnaanta weyn ee badeecaddu waa 230～460kg/m3. Cufnaanta cufnaanta kala duwan, cabbirka cabbirka walxaha, iyo dhexroorka daloolka ee lagu sameeyay ballaarinta noocyada kala duwan ayaa ah heerarka.
Marka la barbardhigo kaalmooyinka shaandhada sida ciidda qubeyska silica, badeecadani waxay leedahay faa'iidooyinka biraha waxyeellada yar iyo qaybaha aan birta ahayn, cufnaanta cufnaanta fudud, xawaaraha sifeynta degdegga ah, iyo saamaynta sifeynta wanaagsan.
Adeegsiga kaalmada shaandhaynta Perlite
Gargaarka shaandhaynta ee Perlite ayaa si weyn loogu isticmaalay dhaqashada wax soo saarka sifeynta degdegga ah ee biirka iyo warshadaha kale ee cabitaanka, warshadaha dawooyinka, warshadaha rinjiga iyo dahaarka, iyo warshadaha batroolka.
Geedi socodka gargaarka shaandhaynta Perlite
Macdanta --- Qoondaynta --- Qallajinta --- Quudinta --- Calcination/dhalaalid --- Qaboojinta --- Burburka --- Kala-saarista Hawada ee marxalado badan leh --- Xulashada --- Degranulation --- Bacaha
Ka dib markii perlite la ballaariyo ka dibna la dhex maro shiididda iyo garaaca, si taxaddar leh oo tartiib ah ayaa dhulka loogu dhex mariyaa heerar badan si dusha sare ee walxaha loo simo. Habka sameynta keega shaandhaynta ayaa is tuujin kara. Dusha alaabta ugu dambeysa waa la jeexjeexay oo way is qaniini doonaan. Xidhiidhku wuxuu sameeyaa farqiga shaandhaynta adag, kaas oo ay ku jiraan kanaallo badan oo gudaha ah, kuwaas oo aad u yar oo ku filan inay xannibaan walxaha micron-ka-yar, laakiin isla mar ahaantaana leh porosity of 80%-90%, oo ilaaliya xoog wax-galinta oo joogto ah.
Gargaarka shaandhaynta ee Perlite waa budo adag oo cad oo ka kooban walxaha galaaska ah ee aan caadiga ahayn. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa potassium, sodium, iyo aluminosilicate. Kuma jirto maaddo dabiici ah. Waxaa jeermis-diley gubasho heer-sare ah inta lagu guda jiro geeddi-socodka wax-soo-saarka, iyo cufnaanta cufnaanta ayaa 20% ka khafiifsan dhulka diatomaceous.
Qaybaha gargaarka shaandhaynta ee GK-110 waa xaashiyo qaloocan oo aan joogto ahayn, keega shaandhaynta ee la sameeyay wuxuu leeyahay porosity of 80%-90%, walxaha kastana waxay leeyihiin daloolo badan oo xididdada leh, sidaa darteed si dhakhso leh ayaa loo sifeyn karaa oo waa la qabsan karaa qaybaha aadka u fiican 1 micron. Faa'iidada gaarka ah ee warbaahinta filter perlite ayaa ah inay xajisato adkayaasha iyadoo la ilaalinayo qulqulka dareeraha sare. Waxay leedahay xasilooni kiimiko oo wanaagsan oo aan lahayn wax wasakhaysan. Maadada ion ee birta culus ayaa guud ahaan ah 0.005%, sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa sifeynta heerka-cuntada.
Cabbirada gargaarka shaandhaynta Perlite
K (degdeg ah) Z (dhexdhexaad ah) M (hooseeyo)
Cufnaanta guud (g/cm)
Heerka socodka qaraabo (s/100ml) 30～60 60～80
Joogtaynta (Darcy) 10～2 2～0.5 0.5～0.1
Arrin la laalay (%) ≤15 ≤4 ≤1
102um (150目)Hadhaaga shaandhada (%) ≤50 ≤7 ≤3
Hore: Soo -saareyaasha budada perlite ee Shiinaha oo la ballaariyay
Xiga: tayo sare leh oo maalinle ah Iftiimin baaxad leh ayaa la ballaariyey si loo iibiyo
Perlite Ballaadhan oo Balaadhan
Unug Xiran oo La Fidiyay Perlite
Ballaarinta Perlite Insulation
Ballaariyay Qiimaha Perlite
Ku -darista Cuntada Perlite
Perlite ee Horticultural
Cabbir Weyn Perlite
Wakiilka Daboolida Perlite
Xakameeyaha Cufnaanta Perlite
Powder Gargaarka Shaandhaynta Perlite
Guddiga Indulation Perlite
Perlite -ka wax -ku -oolka ah
Perlite -ka -saarista Qashin -qubka
heerkulka sare ayaa la balaariyay perlite for sale
Macdanta budada budada ah ee duleelka cenosphere par par ...
HGM Hollow Glass Microspheres insulatio kaamerada ...
Miisaska Dhagaxa ah ee casriga ah ee loogu talagalay qurxinta guriga ...
Deegaanka bay'ada u fiican Zeolite deegaanka ...
Budada dhoobada Bentonite ee timaha / wejiga / ilkaha
Shangtianti Aagga Horumarinta Miinada ee aan macdanta lahayn, Magaalada Xinyang, Gobolka Henan.